ASSOCIATION LA CHARITE DE MADAGASCAR : Nitondra fanampiana ho an’ireo tra-pahasembanana - Journal Madagascar
Tsy mitsahatra manampy ireo olona sahirana ny « Association La Charité de Madagascar » indrindra amin’izao vanim-potoana ny hamehana ara-pahasalamana izao. Ireo olona tra-pahesambanana indray no notoloran’ny fikambanana vatsy toy ny vary 10 kilao, menaka iray litatra, siramamy iray kilao, lafarinina iray kilao, « pâte », ronono ary savony ny 30 jolay 2020 teny amin’ny foibeny Andranomena. Ireo sembana hita matetika eny an-dalambe miisa 65 no nisitraka izany. « Ao anatin’ny sokajin’olona marefo ireo sembana ara-batana ka izany indrindra no anton’izao fanomezana izao. Isaorana manokana i Al Hajj Ikbal avy any Ihosy nanome izao fanampiana izao », hoy i Zouber Assenje, filohan’ny « Association La Charité de Madagascar ».
Ankoatra ny fanampiana ireo olona sahirana dia mandray anjara amin’ny fanamboarana foto-drafitr’asa fototra toy ny vovon-drano ny fikambanana. Mandray anjara amin’ny fampitaovana ny toeram-pitsaboana any ambanivohitra ihany koa izy. Ao anatin’ny asa sosialy ataony ny fizarana fitaovam-pianarana sy fizarana sakafo ho an’ny ankizy.